Natiijooyinka Raadinta ee !trpst#/trp-gettext>
Falanqee: FalanqePostsBogaggaKhayraadkaFarshaxanadaDadkaShaqooyinkaMaalgashiga Saameynta
3161-3170 of 3228
Sandy Spieler: 2014 Fanaaniinta Muhiimka ah
Buug-gacmeedka xusuus-qorka ah ee qoraallada ku saabsan qoraallada ku saabsan Sandy Spieler ee farshaxanka iyo dhaqdhaqaaqa, taariikhda shaqadeeda iyo nolosha iyo sawirrada.
McKnight Artist Fellows: Sawiridda Xirfadaha Farshaxanka
Juun 2012 Saaxiibka rikoorada 'xirfadlayaasha' ee macluumaadka xirfadlaha ah, oo dhexdhexaadin ah oo ay sameeyeen Pitch Interactive, oo qayb ka ah dabaaldegga sanadlaha ah ee sanadguurada 30aad ee barnaamijka Makhirada ah ee McKnight.
Warbixinta Cusub ee Soo Saarista Suuqa Suuqa Nadiifta ah, Shaqooyin Wanaagsan iyo Lacag Bixin ah
Guul lagu guuleysto dhaqaalaha tamarta tamarta nadiifka ah waxay la socotaa faa'iidooyinka dhaqaale ee mustaqbalka ee xirfadaha khibradda leh ee aadka u wanaagsan. Toddobaadkii hore, Guddoomiyaha Dayton wuxuu sameeyey laba ogeysiis muhiim ah oo la xiriira shaqooyinka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah. Marka ugu horeysa: $ 25 milyan oo cusub oo qorrax leh oo la dhisi doono laba ka mid ah labada gawaarida
Cuntada Fikradda: Barashada Ingiriisiga Aqoonta iyo Sharciga Guusha
September 30, 2014 Warbixin Cusub oo McKnight ah oo uu gudoominayay Conor P. Williams, Ph.D., iyo Colleen Gross Ebinger oo baaraya Xeerka LEAPS 2014, sharciga ugu sarreeya ee qaranka ee taageerida ardayda English-ka ah.
Minnesota & Isbeddelka Cimilada: Maalinkeena maanta wuxuu bilaabaa Maanta
Sebtembar 2014 Warbixin cusub oo ka socota Guddiga Tayada Deegaanka ee Minnesota ayaa ku dareysa macluumaad iyo deg-deg ah si loo dedejiyo dhaqaalaha yar-yar.
Guryaha MSP Housing + Xisaabiyaha Gaadiidka
June 2014 Golaha Gobalka ee ULI MN cusub ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo shakhsiyaadka, qoysaska, siyaasad dejiyeyaasha, qorsheeyayaasha, warshadaha guryaha iyo beelaha ku yaal Twin Cities 13-County Metro si fiican ayaa u qiimeeya kharashka isku-darka guryaha iyo doorashooyinka gaadiidka. MSP H + T Xisaabiye waa qalab la customizable oo loogu talagalay in si fudud loo qiyaaso isku-darka ...
Isu-duwaha Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadiyaha
June 2016 Wadashaqeyn Dhexdhexaadiyeyaasha Xarunta Dhexe (2007-2016) wuxuu ahaa iskaashi cusub oo lagu taageerayo 14 xarumo maxali ah iyo qaran oo doonaya inay abuuraan "waddo" ah oo ku yaalla Minneapolis iyo Saint Paul's Light Line Light Rail Transit (LRT).
Cuntada Fikradda: Sheeko Saddex Magaalo ah
June 3, 2014 Golaha Ammaanka ee McKnight, oo ah Jay Walljasper, ayaa ugu dambayntii casharro qiimo leh ka qaadatay Seattle, Denver, iyo Toronto - gobolada u adeega tartanka iyo dhiirigelinta Minneapolis-St. Bawlos.
Warbixinta Sanadka 2013
Abriil 2014 Hay'adda McKnight Foundation ee Sanadka 2013 ee warbixinta la jahwareeray ayaa hadda la heli karaa. Barnaamijka barnaamijka, warbixintu waxay muujineysaa sida degdegga ah ee ka dambeysa shaqadayada iyo sawirada waxqabadyada hadda iyo natiijooyinka. Sida had iyo jeer, macluumaadka barnaamijka ugu dambeeyay ee McKnight iyo warbixinnada maaliyadeed ayaa laga heli karaa boggayaga internetka.
Maareynta Aqoonta: Nidaamka Raadinta
Maarso 2014 - Daraasad kakan oo ku saabsan machadka McKnight Foundation ee dhowaan la ogaaday ee cilmi aqooneed. (Akhriso khudbadda blog ee la xidhiidha Dib-u-eegida Dib-u-cusbooneysiinta bulshada.) Helitaanka istaraatiijiyada ku saabsan sida aad u abaabusho uguna kala qaybqaadatid aqoontu waxay ka caawin kartaa qof kasta inuu gaaro himilooyinkooda si wax-ku-ool ah. Anaga waxaan joognaa McKnight Foundation oo inta badan nalaga helo ...
Hore 1 ... 315 316 317 318 319 ... 323 Xiga